Neogene fauna: njirimara na evolushọn | Netwọk Mgbasa Ozi
Na Oge Cenozoic enwere ọtụtụ oge. Ọ Oge Neogene Ọ bụ oge nke abụọ nke oge a wee bido ihe dịka nde 23 afọ gara aga wee kwụsị ihe dịka nde 2.6 afọ gara aga. N'ime oge a, ụwa anyị nwetara mgbanwe na mgbanwe dị iche iche ma na mbara ala ma n'ogo nke ihe dị iche iche dị ndụ. Na Neogene fauna Ihe ejiri mara ya bu inwe otu ihe di nkpa n'akụkọ ihe mere eme nke uwa, dika ihe mbu hominid.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị njirimara niile na mmalite nke ụmụ anụmanụ Neogene.
1 Oge Neogene
2 Mmepe nke ndụ na Neogene
3.2 Neogene fauna: mammals
Oge Neogene a ruru ihe dịka nde afọ iri abụọ ma nwee mgbanwe dị ukwuu n’ogo ala na ọkwa nke ihe dị iche iche. Amara ya dika oge nke mbu hominids amara dika Australopithecus putara. Speciesdị a nke hominids ha na-anọchite anya ndị nna ochie nke mmadụ.
N'oge oge Neogene enwere mgbanwe dị ukwuu na ọkwa mbara ala n'ihe gbasara ọrụ ala. Kọntinent gara n'ihu na nkpụsị nwayọ nwayọ site n'ebe anyị nwere taa. Njegharị a nke kọntinent mere ka mmiri ndị dị na mmiri gbanwee ma gbochie ụfọdụ mgbochi anụ ahụ, dị ka ala ala nke Panama. Usoro mmegharị ala a bụ ihe omume dị mkpa nke mere ka mbelata nke okpomọkụ na Oke Osimiri Atlantic.
Mgbanwe ndị a niile na ọdịdị mbara ala na ọnọdụ okpomọkụ na-emetụta ọdịdị na mmepe nke ụfọdụ ụdị dị iche iche. N'ime oge a niile, a hụrụ ụdị anụmanụ dị iche iche. Otu ìgwè nke anụmanụ ndị mere mgbanwe kasịnụ ha bụ anụmanụ na-enye mmiri na mmiri, nnụnụ na anụ na-akpụ akpụ.
Mmepe nke ndụ na Neogene
N'ime oge a niile, e nwere mmụba nke ụdị ndụ dị ugbu a. N'ihi ihu igwe, ọnọdụ ụwa dị iche iche enwe mmetụta dị ukwuu na mmepe na nhazi ọhụrụ nke ihe ndị dị ndụ. Ma ahihia na umu anumanu gbanwere mgbanwe di iche-iche, umu anumanu bu onye nke nwegasiri ihe di iche-iche. Ifuru ahụ wee fọdụ ntakịrị.
Osisi Neogene na-apụta ìhè n'ihi na ọ na-emewanyewanye n'ihi ihu igwe. Ebe ọ bụ na ihu igwe na oge a dịtụ oyi, ọ na-egbochi mmepe nke oke ọhịa na oke ọhịa. Tụkwasị na nke a, ọdịda a nke okpomọkụ mere ka ọpụpụ nke nnukwu mpaghara ha. N'ihi ọnọdụ gburugburu ebe obibi a, ụfọdụ ụdị ahịhịa ga-eme nke ọma nke nwere ike ime mgbanwe maka ọnọdụ okpomọkụ dị ala.
Osisi nwere ike ito eto n'okpuru onodu ojoo bu ndi nke ezi na ulo. Fọdụ ndị ọkachamara na-ezo aka n'oge Neogene dị ka afọ nke ahịhịa. Ọ bụghị ihe niile bụ ihe ọjọọ n'ihi na osisi. E guzobere ụfọdụ ụdị angiosperms ma mepụta nke ọma.
Anyị ga-ahụ etu ihu igwe na mmepe ala siri metụta ụmụ anụmanụ Neogene. N’oge a, otutu umu anumanu di iche iche di iche-iche di iche-iche, nke anyi ghotara na ha malitere kari, dika anumanu anumanu, na anunu di iche-iche na nnunu. Usoro okike mmiri nwere mmepe buru ibu, ọkachasị otu ìgwè anụ ọhịa.
Anyị ga-enyocha otu n'otu nke otu anụmanụ nke mepụtara kachasị n'oge ụmụ anụmanụ Neogene.
N'ime otu nnụnụ ndị kachasị mepụta bụ ndị ahụ ha so n'òtù ndị ngafere. A makwaara ụfọdụ nnụnụ nke oge Neogene dịka nnụnụ ụjọ. Ìgwè anụmanụ a buru ibu biri na kọntinent America. Taa nnụnụ nke passerine otu ndị kasị iche iche na widest otu. Ejiwo ya la elu ogo oge.
N'ime njirimara ha bụ isi anyị nwere na ha bụ anụmanụ ndị e ji ụkwụ nwere ụkwụ ha ga-anọ na ya. Na mgbakwunye, o nwere ikike ịbụ abụ. Ikike ndị a na-eme ka emume mmemme dị mgbagwoju anya. Ìgwè nke passerines a makwaara dị ka otu ìgwè nke ụmụ nnụnụ. N'oge oge Neogene otu nnụnụ malitere ịmalite na ike na ume. Ebe ọ bụ na kọntinent ahụ nọgidere na-aga n'ihu ọnọdụ dị ugbu a, anụmanụ ndị a dịgasị iche.
Karịsịa na South America bụ ebe a hụrụ ọtụtụ ihe ndekọ ihe ochie. Ihe ndekọ ndị a na-agba akaebe na e nwere nnụnụ buru ibu. Ọtụtụ n’ime nnụnụ ndị a buru ibu ma ha enweghị ike ịgbapụ. Agbanyeghị, ha ghọrọ nnukwu anụ ọhịa oge a. Otu nnụnụ a makwaara aha nnụnụ ụjọ.
Neogene fauna: mammals
Anụmanụ bụ otu ìgwè anụmanụ ndị gbanwere nnukwu mgbanwe. Otu n'ime ndị otu kachasị bụ ụmụ anụmanụ nke ezinụlọ Bovidae na Cervidae. N'ime anụmanụ abụọ a anyị na-ahụ ewu, atụrụ, ele, mgbada na mgbada. Anumanu ndia nile gbasaa ebe nkesa ha n'uzo di egwu.
N'otu aka ahụ, enwere anụmanụ ndị ọzọ buru ibu dịka enyí, mammoths na rhinos ndị nwetara nnukwu mmepe. Offọdụ n'ime ụdị ndị a, dịka mammoth, enweghị ike ịlanarị ruo ugbu a n'ihi mgbanwe ụfọdụ mechara bịa.
Ekwesiri iburu n'uche na na Neogene fauna ụfọdụ primates, kpọmkwem enwe, guzo. Otu ọ bụla nke primates nwere ebe obibi dị iche iche ma nwee mgbanwe ụfọdụ na usoro evolushọn ha. A hụrụ ọtụtụ primates na mpaghara Africa na America.
Na ụmụ anụmanụ nke Neogene anyị na-ahụkwa mmepe nke anụmanụ ndị ọzọ na-enye anụ ọhịa dịka felines na canines. Fọdụ bea na hyenas dịkwa iche iche n'oge a. N’etiti otu anụmanụ nke mammals, otu n’ime ihe di oke mkpa mere na usoro mgbanwe nke mmadu. Ma nke ahụ bụ akpa hominid putara ma mebe.
Nke mbu bu hominid emeputara baptism site n’aha Australopithecus. Ihe e ji mara ya bụ ịnwe obere pere mpe na ngagharị abụọ.
N’ikpeazụ, anụ na-akpụ akpụ na-etolitekwa na mmiri Neogene. Anyị ga-ahụ n'etiti ha awọ, toads na agwọ ndị nwere ike ime ka ọchịchị ha gbasaa. Nke a bụ n'ihi nnukwu nri dị. Ihe oriri ha dabere na ụmụ ahụhụ, nke bara ụba.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere ụmụ anụmanụ Neogene.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Neogene fauna